Umtsalane welizwe eStockholm, eTyresö
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguPia
I-cottage yokuluka iphuma kwi-1850s kwaye inika umoya wothando. Nazi isitovu esivuthayo, isitovu sentsimbi, i-sauna efudunyezwe ngamaplanga kunye neevaranda ezimbini ezincinci. Efama kukho amahashe, iinkukhu kunye nekati yethu ezinzileyo.
Thatha ithuba lomoya opholileyo wothando. Basa umlilo kwiziko lentsimbi okanye kwisitovu. Fudumeza isauna eyenziwe ngamaplanga uze wonwabele isiselo esihlaziyayo kwiveranda. Indalo isemnyango wakho inentaphane yeentaka, amaxhama kunye nempungutye, kodwa akathandwa kangako kuthi oko wathatha iinkukhu.
4.89 out of 5 stars from 503 reviews
4.89 · Izimvo eziyi-503
I-cottage ime kakuhle efama kwaye ikufuphi nechibi apho unokuhamba ngephenyane okanye uhambe nge-ice skating ebusika. I-Tyresta Nature Reserve, iTyresö Palace eneepaki, imiqolomba kunye nolwandle isondele kakhulu.
Ngaba ungathanda ukunikwa isidlo sakusasa esimnandi kwi-cottage okanye isidlo sangokuhlwa sangokuhlwa kwiOrenji, apho uhlala ungqongwe ziidiliya, iilamuni kunye nemithi yamakhiwane? Sibuze kwaye ngokuqinisekileyo sinokulungiselela into entle.
Ngaba ungathanda ukunikwa isidlo sakusasa esimnandi kwi-cottage okanye isidlo sangokuhlwa sangokuhlwa kwiOrenji, apho uhlala ungqongwe ziidiliya, iilamuni kunye nemithi yamakhiwane…
Iilwimi: Dansk, English, Norsk, Español, Svenska
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Tyresö